mushaRailwayKENTİÇİ Rail Systemshavaray
Antalya achasangana naMonorail uye Metro
Antalya Metropolitan Municipality Meya Chief Advisor, achitaura kuti vanoronga kugadzira monorail pakati peLiman neAntalyaspor nhandare. Cem Oguz, "Kana tikawana kwavanobva nhandare kuenda kuKundu pamusoro pe16 makiromita echirongwa chepasi pevhu isu tine chikamu" [More ...]
Vhangeri yeHavaray kunaImir
Monorail, iyo yakanga yafanirwa kugadziriswa pakati peGaziemir ESBAŞ nechiteshi chemasitirwo emvura neGaziemir New Fairground (Fair İzmir) mugore rekutanga ra2016 muIzmir pasi pehurumende yehurumende yeAziz Kocaoğlu, yakadzokororwa zvakare nemutungamiri mutsva Tunç Soyer. [More ...]
10 New Metro Line Inofanira Kuitwa muIstanbul
10 New Metro Line ichavakwa muIstanbul Iri Matunhu Achavhenekera Nyenyedzi Mune Dzimba: Iyo inonyanya kukosha 10 metro mutsetse, iri kusvika padhuze nekushanda kwayo muIstanbul, inofambisa basa rekufambisa nzvimbo dzakawanda kubva kuBakırköy kuenda ku Çekmeköy, Kağıthane kuenda kuZeytinburnu. [More ...]
Kubva paPurofesa akarega kutora chikwereti kuenda kuHavaray System paSarıçay
Canakkale Mojakiz Mart University (COMU) yeFekitori yeDhipatimendi reInjiniya reGeology pamudyandigere. Dr. Doğan Perinçek akakwevera tarisiro neako chirongwa chaakakurudzira guta racho munhau dzemagariro. Izita rake pama media enhau [More ...]
Pulse ye World World Sector ichaiswa muIzmir
Eurasia Rail International Railway, Chiedza Rail Systems, Dziviriro uye Logistics Fair 10-12 iri kugadzirira kutora inotungamira mazita epasireni njanji yenyika muIzmir muna Kubvumbi 2019. Imwe yedunhu reEurasi uye zvakanyanya pasi [More ...]
Mhosva, Ankara Courthouse Inoparadzwa Nekutengesa Kudhanho Centre yakati yakamira
Ankara 11 Dare Rinodzora, Chamber of Architects Ankara Bazi re Ankara Courthouse vachipesana nekuparadzwa kwenzvimbo yekufambisa inzvimbo mune iyi nyaya, vakasarudza kumisa kuurayiwa. Chamber of Architects Ankara Bazi sarudzo, "Courthouse nzvimbo dzinogona kuwana [More ...]
CHP Green Yakabvunzwa Havaray IInternet Metrobus Vehicle Cartridge Scratcher
Mutevedzeri weCHP Ankara, Nihat Yeşil, uyo anoti Havaray haina mutengo mutengo wechitima kupfuura Metro, ane hanya nemafambisi eruzhinji uye kunyanya mhando yekufambisa ye monorail inogona kubatanidzwa zviri nyore neMetro. [More ...]
Kusarura kuchaparadzirwa muAnkara neAnkara
Ankara Metropolitan Municipality ichapa ift nekukurumidza-chikafu Metro kune Metro uye Ankaray zviteshi mukati memwedzi weRamadan kwevashanyi vemaguta makuru uye vashanyi vanobva kunze kweguta. [More ...]
Green neCP: Chirongwa chikuru chekutakura Ankara chinofanira kunge chakabatanidzwa uye chisina kufanana
Pane mamwe mutsauko pakati pe "chekufambisa" uye "chekufambisa .. Ankara Mutevedzeri Nihat Yeşil; Iko hakuna kududzirwa kana pfungwa yehurongwa hwekuTakura kweDanho unda muMutemo wekuvandudza. Ministry of Transport ine chiremera mune Master Zvirongwa zveMaguta edu; Metropolitan [More ...]
Sefaköy-Başakşehir Havaray System yakabviswa, pane nzvimbo yepasi pekuuya
Meya weIstanbul Metropolitan Municipality Mevlüt Uysal akapa ruzivo kunhengo dzenhau nekuongorora chirongwa ichi chicha shandiswa sepaki ye5 zviuru zvemamita mativi pamatanho matanhatu ekupaka ari kuitwa muKüçükçekmece. President Uysal [More ...]
İBB Mutungamiri Mevlüt Uysal Anoparidza Kubviswa kweHavaray Project
Meya weIstanbul Metropolitan Municipality Mevlüt Uysal akapa ruzivo kunhengo dzezvenhau nekuferefeta kuvaka kwe15 zviuru mamaira emamaki park iyo ichashandiswa senzvimbo nhanhatu dzekupaka dzichiri kuvakwa muKüçükçekmece. President Uysal zvakare [More ...]
Topbas project Havaray yakabviswa
Sefaköy-Başakşehir Havaray chirongwa chakabviswa. Iyo Subway uye light njanji system ichaitwa panzvimbo yeHavaray. Mevlüt Uysal, Meya weIstanbul Metropolitan Municipality (IMM), aregera basa mushure mekunge Mutungamiri Tayyip Erdoğan akumbira kusiya basa. [More ...]
Kufambiswa kwemari kutengeswa muIstanbul kunoramba kusingabatsiri
Mari yekufambisa, inozorerutsa dambudziko remota uye inobvumidza Istanbul kufema, kuenderera nekumhanya kuzere. Iro mega mega yeIstanbul haina kukwanisa kuwana mhinduro kune vakawanda [More ...]